पुर्व पुगेका ७ बर्षीय बाल कलाकार आयुब सेनको क्रेज देखेर सबै चकित ! « aamsanchar.com , aamsanchar
पुर्व पुगेका ७ बर्षीय बाल कलाकार आयुब सेनको क्रेज देखेर सबै चकित !
धरानका नाम चलेका स्कुलहरु मध्येका के।के। इन्टरनेशनल, दिपेन्दै प्रहरी स्कुल, पव्लिक हाईस्कुल, यु।एन कलेज र धरान इंग्लिस बोर्डिंङ स्कुल लगायत अन्य प्लस टु र बिद्यालयहरुमा मेरी मामुको टोली पुगेको थियो । धरानका स्कुले बिद्यार्थीहरुबाट फिल्मलाई लिएर कौतुहलता र उत्साह प्रकट भएको छ ।
मेरी मामु टोली यहि मंगलबार, बुधबार र बिहिबारसम्म पुर्वका दमक, इटहरी र बिराटनगरका बिभिन्न बिद्यालय तथा प्लस टुमा पुग्नेछ । फिल्म युनिटले लागु गरेको मामु संग थाईल्याण्ड टुरको बिषयमा धेरै बिद्यार्थीहरु र अभिभावकहरुले कौतुहला जनाए । यस अफर अन्तर्गत फिल्म युनिट पुगेको स्कुलका बिद्यार्थीहरुले टिमले दिएको फर्म भरेर लक्की ड्र मार्फत थाईल्याण्ड जान पाउनुहुनेछ । फिल्मको गीत, बाल नायक आयुब सेनको अभिनय प्रभाव, नव नायिका कुसुम गुरुङको उपस्थिति लगायतका कुराले मेरी मामुको यो प्रोमोशन शैली उत्कृष्ट बनेको छ ।